Weeraro Gaaadiid Dagaal Lagu Gubay Oo Afghanistan Ka Dhacay. – Bogga Calamada.com
Weeraro Gaaadiid Dagaal Lagu Gubay Oo Afghanistan Ka Dhacay.
September 30, 2016 1:04 pm Views: 17
Wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay qaraxyo iyo weeraro toos ah ay ka dhaceen dalka Afghanistan kuwaasi oo sababay khasaara kala duwan.
Qaraxyo iyo weeraro toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada Kufaarta NATO iyo kuwa maamulka daba dhilifka Afghanistan kuwaasi oo ka kala dhacay gobalada Baglaan’Helmand iyo Gazni oo ka wada tirsan dalka Afghanistan.
Qarax ka dhacay duleedka degmada Naawah ee gobalka Helmand oo dhaca dhanka Konfureed dalka Afghanistan ayaa sababay burburka gaari gaashaamaan’iyadoona sidoo kale dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen tobaneeya ka tirsan maleeshiyaatka daba dhilifka Afghanistan oo la socday gaariga ay miinada haleeshay.
Sidoo kale 14 isugu jirta saraakiil iyo askar ka kooban Kufaarta NATO iyo kuwa maamulka daba dhilifka Afghanistan ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar fashil may oo ay kusoo qaadeen saldhig ciidamada Mujaahidiinta ay ka sameysteen deegaanka Shahar Kahnah oo dhaca duleedka xarunta gobalka Baglaan.
Ciidamada Caddaanka iyo kuwa daba dhilifka ayaa ku go’doomay deegaanka ay weerarka kusoo qaadeen kadib markii gabi ahaan ciidamada Mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan ay xireen wadada isku xirta gobalada Qunduuz iyo Baglaan taasi oo sababtay in ciidamada Kufaarta NATO iyo kuwa daba dhilifka ay ku adkaaata iney si deg deg ah ku helaan wax gurmad ah.
Dhanka kale qarax ka dhacay qeybo ka mid ah gobalka Gazni ee dalka Afghanistan waxaa lagu gubay gaari Taangi ah’waxaa sidoo kale qaraxa ku dhintay afar askari oo ka tirsan dowlada Ridada Afghanistan oo gaariga burburay la socday.
Guud ahaan gobalada dalka Afghanistan waxaa si xiriir ah kaga socda howlgalka xilliga Gu’ga Al-cumariyah oo Imaarada Islaamiga Afghanistan ay ku dhawaaqday dhowr bilood ka hor.